तपाईंको कम्पनीलाई भ्याटमा दर्ता कि प्यानमा ? केमा दर्ता गर्दा के फाइदा ? यी 'आधारभुत' कुरा बुझे हट्छ 'कन्फ्युजन'
ARCHIVE, POWER NEWS, TAX, TIPS » तपाईंको कम्पनीलाई भ्याटमा दर्ता कि प्यानमा ? केमा दर्ता गर्दा के फाइदा ? यी 'आधारभुत' कुरा बुझे हट्छ 'कन्फ्युजन'
काठमाडौँ- कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । तर करमा दर्ता गर्न जाँदा धेरैको प्रश्न हुन्छ, 'भ्याटमा दर्ता गर्ने कि प्यानमा ?' 'भ्याटमा दर्ता गर्दा के राम्रो हुन्छ के बेफाइदा ? अनि प्यानमा मात्र दर्ता गर्दा के फाइदा के बेफाइदा ?' यसो द्विविधा धेरैलाई पर्ने गरेको छ । यो कन्फ्युजन हटाउन हामीले नेपाल ट्याक्स अनलाइनले तयार गरेको यो सामाग्री प्रस्तुत गर्दैछौं ।
प्रकाशित : Tuesday, February 20, 2018
Tags : ARCHIVE, POWER NEWS, TAX, TIPS